कुनैपनि यौन जोडीबीच हुने अनिच्छित गर्भ रोक्न सावधानी पुर्याउन आवश्यक छ । शारीरिक तथा मानसिक रुपमा तयार नभएका यौनजोडी विशेष रुपमा चनाखो रहनुपर्दछ । अनावश्यक गर्भनिरोधकका निम्ति हरेक जोडीमा गर्भ नियन्त्रण उपायको बारेमा ज्ञान हुन जरुरी देखिन्छ । अनावश्यक तथा अनिच्छित गर्भ रोक्न महिला पुरुष दुवैमा समान भूमिका रहन्छ ।
हुन त, चिकित्सा क्षेत्रमा यससम्बन्धि थुप्रै उपायहरु रहेका छन् । तर, ती उपायहरु सबैमा उत्तिकै प्रभावकारी नरहन पनि सक्छ । त्यस्ता उपायले कसैमा साइड इफेक्ट पनि देखिन सक्छ । त्यसैले यहाँ अनावश्यक एवम् अनिच्छित गर्भधारणको समस्यालाई कम गराउन सक्ने केहि सरल एवम् घरेलु उपायको बारेमा चर्चा गरिएको छ । क्यालेन्डर क्यालेन्डरअनुसार महिलाले आफ्नो मासिक चक्र अंकित गर्न सक्छिन् । नियमित रुपमा महिनावारी हुने महिलाले क्यालेन्डरको सहायताबाट कुन समयमा ओभुलेसन हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छिन् ।
तसर्थ यो अनिश्चित गर्भधारणबाट बच्ने एक भरपर्दो उपाय पनि हो । यसका लागि महिलाले कम्तिमा पनि १२ महिनाको आफ्नो महिनावारीको समयलाई अंकित गर्नुपर्दछ । सबैभन्दा कम दिनमा भएको महिनावारीको अवधिबाट १८ दिन र लामो समयमा भएको महिनावारी दिनको अवधिबाट ११ दिन घटाउनु पर्छ । त्यसबाट जुन दिन निस्कन्छ त्यो नै गर्भधारण रहने समय हो । गर्भ नचाहने दम्पतीले यस समयमा गरिने सम्भोगमा सुरक्षाको उपाय अपनाउनु पर्छ ।
डिम्ब निष्काशनको समयमा शरीरको तापक्रम बढ्छ । त्यसैले दिनमा ३ पटकसम्म शरीरको तापक्रम नाप्नुपर्छ । र, अन्य समयको तुलनामा तापक्रम बढी भएको दिन डिम्ब निष्काशन हुदैछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यस समयमा पनि यौनसम्पर्कको क्रममा सुरक्षाका उपाय अपनाउने वा सम्पर्कबाट टाढा रहने गर्नुपर्दछ ।
गर्भनिरोधकको उपायमध्ये यो सबैभन्दा सरल एवम् प्रचलित उपाय हो । यसको प्रयोगले महिलामा गर्भधारणको प्रकृयामा रोकावट ल्याउनुका साथै यौन जोडीलाई यौन संक्रमणबाट समेत जोगाउँछ । कमै मात्र व्यक्ति यस्ता हुन्छन्, जसले आफ्नो यौन जीवनकालमा यसको प्रयोग नगरेको होस् ।
यौन आनन्दः के हो जि स्पट ?
महिलामा उत्तेजना कसरी बढाउने ? भन्ने कुरा धेरैको लागि महत्वपूर्ण र चासोपूर्ण कुरा हो । महिलालाई कुन अंगमा छुँदा उनीहरुमा...
कामसूत्र : आनन्ददायक यौनका लागि उपयुक्त आसन
यौन सम्पर्कले व्यक्तिलाई शारीरिक एवं मानसिक रूपमा समेत तन्दुरुस्त राख्ने गर्छ । तर कहिलेकाँही खराब जीवनशैलीले हाम्रो यौन जीवनलाई पनि...
के हो सम्भोगको लत ?
सम्भोग आममानिस वा पशुपन्छीको लागि अत्यावश्यक कुरा हो । सम्भोगको तीव्र इच्छालाई दमन गर्ने हो भने यसले यौन गतिविधिमा नै...
पारिवारिक जीवनमा धेरै व्यावहारिक समस्या हुन्छन् । यी...
कोरोना संक्रमणबाट विराटनगरमा दुईजनाको मृत्यु
दशैं र कोरोनाः संयम र सावधानी आवश्यक
बाँकेमा अस्वभाविक ढंगले बढ्यो मातृ मृत्युदर
बाँकेमा आज ६० जना थपिए, संक्रमितको संख्या २९ सय नाघ्यो
दाङका कोरोना संक्रमित पुरुषको कोहलपुरमा मृत्यु
बाँकेका सहायक सिडिओ हरि प्याकुरेललाई कोरोना पोजेटिभ
सुदूरपश्चिममा एक लाखबढीको पीसीआर परीक्षण
कोरोना अपडेटः आज ३६३७ थपिए, ३२१५ डिस्चार्जः २१ जनाको मृत्यु
बाँकेमा पाँच महिनामा २९ जनाको मृत्यु (मृतकको विवरणसहित)
भेरी अस्पतालका दुई जना अब्वल चिकित्सकको सरुवा
नेपालमा कोरोना भाइरसबाट पहिलो पटक स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु